Diyaarad Pakistan leedahay oo dhacday - Worldnews.com
Australia: Nin damcay inuu xoog ku galo qolka duuliyayaasha diyaarad hawada ku jirta
Ciidammada Australia oo aad u hubeysan ayaa fuulay diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha Malaysia Airlines oo lagu khasbay inay dibu ugu laabato Melbourne ka dib...
Diyaarad ku burburtay Iran iyo wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha
TEHRAN - Diyaarad nooca rakaab ah oo ay la socdaan 66 qof ayaa ku burburtay saaka oo Axad ah bartamaha dalka Iran, iyadoo ay ku dhinteen dhamaan dadkii saarnaa, sida ay...
​37 qof oo ku dhintay diyaarad ku bur-burtay Kyrgyzstan
Diyaarad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa ku bur-burtay waddanka Kyrgyzstan xilli ay ku sii jeeday magaalada Istanbul balse kusii hakanaysay garoonka diyaaradaha Manas....
Gareowe Online 2017-01-16
​Diyaarad Ruushku leeyahay oo ku dhacday Badda Madow
Wasaaradda Difaaca Ruushka, ayaa sheegtay inay badda ku dhacday diyaarad laga leeyahay dalkaas oo siday in kabadan 72 ruux oo u badnaa Kooxda bambayda ciidamada dalkaas....
Gareowe Online 2016-12-25
Diyaarad xamuul oo Turkiga laga leeyahay oo ka soo duushay Hong Kong ayaa ku dhacday Kyrgyzstan, iyadoo dishay 37 qof, oo intooda badan ay joogeen dhulka, ayay sheegeen...
Duuliye khamri cabay oo 8 bilood oo xabsi ah lagu xukumay
Duuliye sarqaansanaa oo doonayey in uu kaxeeyo diyaarad ayay Kanada ku xukuntay 8 bilood oo xabsi ah. waxaana xukunkaasi laga jaray mudadii uu ku sii jiray xabsiga....
Duuliye sarqaansanaa oo doonayey in uu kaxeeyo diyaarad ayay Kanada ku xukuntay 8 bilood oo xabsi ah. waxaana xukunkaasi laga jaray mudadii uu ku sii jiray xabsiga. Miroslav Gronych, oo 37 sano jir ah ayaa qirtay dambiga lagu eedeeyey 21-kii bishii March. Waxaa lagu xiray magaalada New York habeenkii uu bilaabanayey sanadka cusub kadib markii uu ku miyir daboolmay diyaarada oo...
Shirkadda diyaaradaha caalamiga ah ee Pakistan (PIA) ayaa amartay baaritaan la xiriira laba mayd oo looga soo tagay magaalada New York. Waxaa la qorsheynayay in labada mayd loo duuliyo magaalada Lahore ee Pakistan, 28-kii Oktobar, balse waxaa si qalad ah loogaga soo tagay garoonka caalamiga ah ee JFK ee New York. Duullimaadka wuxuu ahaa midkii ugu dambeeyay ee PIA isaga kala...
Diyaarad AirAsia oo ay cabsi soo wajahday iyada oo duulimaad ku jirta
Diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee AirAsia oo ku sii jeeday Indonesia ayaa ku qasbanaatay in ay dib ugu laabato Australia ka dib markii ay duuliyeyaashu sheegeen in ay cilad soo wajahday, sida ay saraakiisha garoomadu sheegeen. Duulimaadkan oo magaciisu ahaa QZ535, ayaa ku sii jeeday jasiiradda Bali ee dalka Indonesia, waxayse dib u laabatay markii ay hawada ku sii...
Diyaarad ku burburtay dalka Afghanistan.
Waxa la sheegayaa in lix qof oo ka tirsan shaqaalaha diyaarad helicopter ah oo ay leedahay Pakistan, oo ku burburtay dalka Afghanistan, in ay bad qabaan caafimaadkoodana uu wanaagsan yahay. Wasaaradda arrimaha dibedda ee dalka Pakistan ayaa sheegtay in qofka Ruushka u dhashay oo hagayay diyaaradda iyo shanti qof ee kale ee u dhashay Pakistan, ay dib ugu soo laabteen magaalada...
Waxaa soo baxay muuqaal muujinaya nin si xoog ah looga soo dejinayo diyaarad ay leedahay shirkadda United airline . Waxaana ka dhashay caro ballaaran muuqaalkani oo si weyn ugu baahay baraha bulshada. Waxaa laga duubay gudaha diyaarada wuxuuna muujinayaa ninkan oo kursigiisa laga soo jiiday iyadoo markaasi ay rakaabka diyaarada isu diyaarinayeen inay duullaan. Diyaarada ayaa ka...